Fikarohana momba ny firaisana Ny tantaram-piainan'ny ankizy taloha sy Phobia, ny fiovan'ny lahy sy ny traikefa any an-danitra: ny tranga Reincarnation an'i Chuey Puang Pei | Ampan Petcherat - Fikarohana Reincarnation
Mpikaroka: Francis Story sy Ian Stevenson, MD
From: Ireo trangan-javatra momba ny fitondran-tenan'ny vatana, ny Boky IV, Thailand ary Birmania, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Ny fahafatesan'ny Chuey Puang Pei
Teraka tao 1946 tany Thailand i Chuey Puang Pei. Ny anaran-drainy dia Tai Puang Pei ary ny reniny dia Tong Bai Puang Pei. Chuey dia nanana rahalahy, Chuan, ary rahavavy iray, Khao.
Ny fianakaviana dia niaina iray amin'ireo lakandrano sy riandrano maro hita any amin'ny lemaka afovoan'i Thailand, izay antsoina hoe khlongs. Ireo lakandrano ireo dia avy amin'ny renirano lehibe ao amin'ilay faritra. Amin'ny alalan'ny fampiasana sambo, ny khlongs dia manompo amin'ny làlam-pitaterana, toy ny lakandrano any Venise, Italia. Nipetraka tao Bang Chan i Chuey, izay teo amoron-dàlana mitovy amin'io anarana io, Khlong Bang Chan.
Mampihomehy sy indrisy fa na dia niaina teo amoron-drano aza i Chuey dia tsy nianatra nilomano mihitsy. Tao 1950, fony izy 4 taona, dia teo amoron'ny Khlong Bang Chan niaraka tamin'ny dadatoany Kla Puang Pei i Chuey sy ny zokiny Chuan, izay teo amin'ny 8 taona tamin'izany fotoana izany.
Chuey sy Chuan dia nilalao tao anaty rano marivo teny amoron-dranomasina. Indray mandeha, tsy dia nahita an'i Chuey i Chuan sy ny dadatoany. Indray mandeha izy dia teo amoron'ny ranomasimbe ary tamin'ny fotoana manaraka dia lasa izy. Fotoana fohy taorian'izay dia nahita ny vatan'i Chuey tao anaty rano izy ireo ary rehefa namoaka azy izy ireo, dia hitany fa nandositra izy. Tsy dia mahazatra io loza io, toy izany tamin'izany fotoana izany, ny tanora dia fantatra fa maty tany amin'ny vondrona Thailandy matetika.
Ny dadatoan'i Klah Puang Pei, dia nilaza fa nahita an'i Chuan nilalao teo amin'ny tongony i Chuan talohan'ny nilatsaham-bato, na dia nanontany aza izy, nandà izany i Chuan. Ny vatan'i Chuey dia nentina tany amin'ny wat na tempoly bodista tao amin'ny Khlong Bang Plee Noi, izay nopetahana azy. Araka ny voalaza, maty tao 1950 i Chuey tamin'ny taona 4. Nanjary lasa môdely bodista i Chuan rahalahiny.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha momba ny zaza: Teraka indray i Chuey amin'ny maha Ampan, zazavavy iray, izay mahatadidy ny fiainany taloha sy ny fahafatesany tamin'ny alàlan'ny maty an-drano
Ampam Petcherat, tovovavy iray, dia teraka tamin'ny volana 1954 tao amin'ny tanànan'i Song Khlong, izay miorina eo amoron-dàlana mitovy amin'izany. Ny Song Khlong dia 15 kilometatra na 9 kilaometatra avy ao Bang Chan, ilay tanàna izay nonenan'i Chuey. Tamin'izany fotoana izany, tsy nahatratra an'i Bang Chan afa-tsy sambo ihany i Song Khlong. Ny Song Khlong dia 37 kilometatra na 23 kilaometatra avy any Bangkok, renivohitr'i Thailand.
Ny ray aman-drenin'i Ampan dia nantsoina hoe Yod ary Kim Saum ny reniny. Rehefa nianatra niteny izy, dia nilaza i Ampan fa i Yod tsy rainy ary i Kim Saum tsy reniny, satria nanana reny hafa izy. Ampan dia nilaza ihany koa fa manana rahalahy taloha izy izay ho lasa mônicha.
Nisaraka ny ray aman-drenin'i Ampan fony izy mbola zaza. Ampan, Kim Saum reniny, dia nafindra 7 kilometatra, na kelikely 4 kilometatra, avaratra mankany amin'ny tanàna Khlong Darn. Raha vao herintaona izy, dia nilaza tamin'ny reniny i Ampan fa manan-dreny sy reny hafa ao Klong Bang Chan izy. Nilaza izy fa zazalahy kely talohan'io ary namaritra ny tranony. Niantso izy rehefa niresaka momba ny tranony teo aloha ary nilaza fa te haka azy any. Nilaza izy fa maty noho ny fandevenana taorian'ny niterahany bibilava. Naverin'i Ampan ity tantara ity momba ny fiainana taloha teo aloha. Nilaza izy fa teo amin'ny fiainany teo aloha, ny anarany dia Chuey.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha: Ampan dia manamarina ny tanànany sy ny tanindrazany taloha
Isan-taona amin'ny fotoam-pijinjana, Kim Saum dia handeha amin'ny sambo mba hivarotra vokatra any amin'ny faritr'i Khlong Bang Chan. Rehefa ampianarina iray sy tapany i Ampan, dia nentin'i Kim Saum tany amin'ny iray amin'ireny fitsangatsanganana ireny. Namantatra ny faritra i Ampan ary nilaza fa teo no nipetrahany teo aloha fony mbola zazalahy.
Raha vao 7 taona i Ampan, dia fantany avy hatrany ny vehivavy iray izay nandeha tao Khlong Darn, tanàna izay nonenan'i Ampan sy ny reniny. Ampan dia nilaza ity vehivavy ity fa izy no nenitoany. Satria mbola tsy nifankahita tamin'i Ampan sy ny reniny mihitsy ny vehivavy teo aloha, tsy niraharaha ny ampanany izy.
Tamin'ny fotoana faharoa dia nahita ilay vehivavy i Ampan ary niresaka taminy ho "nenitoako." Tamin'ity indray mitoraka ity dia nijanona ny vehivavy ary nanontany an'i Ampan ny fomba nahafantarany azy. Namaly i Ampan hoe: "Ianao no zokiko vavy lehibe indrindra." Namihina an'ilay vehivavy i Ampan ary nangataka ny haka ny fianakaviany teo aloha. Io vehivavy io dia Joy Ruang Gun, izay tena nenitoan'ny renin'i Chuey.
Ampan dia mampahatsiahy ny anaran'ny ray aman-dreniny taloha, ny antsipiriany momba ny fiainany taloha sy ny toerana fanokanana
Nanontany i Joy avy eo hoe: "Iza ireo ray aman-dreninao?" Namaly i Ampan fa Tai no anaran-drainy ary i Bai no anaran-dreniny. Tadidio fa ny dadan'i Chuey dia Tai Puang Pei ary ny reniny dia Tong Bai Puang Pei.
Nanohy i Ampan ary nilaza fa teo an-tokantranony teo aloha, nisy hazo bamboo teo anoloan'ny trano ary nisy 2 mena tao an-trano. Nilaza izy fa nisy alika mena 2 sy buffaloes 3 tao an-tranony taloha. Raha ny fahafatesany nandritra ny androm-piainany teo aloha dia nilaza i Ampan fa nilalao tao anaty rano izy rehefa nianjera tao anaty rano ary nilatsaka. Nilaza izy fa ny raim-pianakaviana dia nitondra ny vatany ho any amin'ny Wat Bang Plee ho an'ny fandoroana (ny anarana feno ny tempoly dia Wat Bang Plee Noi).
Satria ireo fanambarana rehetra ireo dia marina nandritra ny androm-piainan'i Cheuy, Joy dia nanapa-kevitra ny hitondra an'i Ampan sy ny reniny hitsena ny fianakavian'i Cheuy.
Ao amin'ny fiainany taloha, Ampan dia mamantatra ny fiainany taloha, Ray aman-dreny, Rahavavy ary Toerana fandrobana
Rehefa nalain'i Ampan tany Khlong Bang Chan sy ny tranon'izy mianakavy tany an-tranony izy dia nandeha tany Tong Bai, renin'i Chuey, nisintona azy mafy ary niteny hoe "reny." Tsy tao an-trano ny rain'i Chuey tamin'ny voalohany, fa i Tai dia niverina avy eo lehilahy roa hafa. Raha mbola tao anaty sambo izy ireo tao amin'ny sambo, dia nangataka ny hamantatra ny rainy teo aloha i Ampan. Na dia teo aza ny ezaka natao hamitahana azy, dia namaritra an'i Tai araka ny tokony ho izy ny fiainany tahaka an'i dadany taloha.
Rehefa nahita an'i Khoa i Ampan, dia nanondro azy izy ary niteny hoe: "Rahavavy." Ny rahavavin'i Chuey dia i Khoa.
Raha nandinika ny trano nipetrahan'ny fianakavian'i Chuey, dia nanamarika i Ampan fa nisy banana sy hazo voanio. Nilaza ihany koa izy fa efa nisy trano roa, fa tsy iray monja. Marina marina i Ampan, toy ny fony mbola velona i Chuey, ny hazo sy ny voanio voanio, saingy nesorina taorian'ny nahafatesany. Toy izany ihany koa ny iray tamin'ireo trano teo amin'ilay trano dia nesorina, saingy nanatrika ny andron'i Chuey. Ian Stevenson dia nampiaiky fa ny ampanany dia nanao fanambarana mazava momba ireo zavatra tsy tao intsony.
Ampan koa dia nanamarika ny toerana teo akaikin'ny trano izay nandevenana an'i Chuey.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Ao amin'ny Tempoly i Ampan dia mamantatra ny fiainany taloha, anadahy, mpiray tam-po aminy ary sakaizany
Rehefa nentina tany amin'ny fiainany taloha izy dia nentina tany amin'ny tempoly i Ampan, na zavatra iray, tao Bang Plee Noi izay nopetahan'i Chuey ary toerana nahaterahan'i Chuan, rahalahin'i Chuey. Tao amin'ny tempoly, dia niaiky i Ampan, teo amin'ny vondron'olon-dehilahy iray na mihoatra, Chuan. Ampan dia nanondro tsara an'i Chaun amin'ny maha-rahalahiny azy teo amin'ny fiainany teo aloha. Samy nitomany tamin'io fihaonana io i Chuan sy Ampan.
Mpitondra iray hafa tao amin'ny tarika dia iray tamin'ireo zanak'olo-mpiray tam-po tamin'i Chuey. Ampan koa dia namaritra tsara io moanina io, Sa Ing, ho toy ny iray tamin'ireo zanak'olo-mpiray tam-po aminy taloha. Nasongadiny tamin'ny tovolahy tanora iray antsoina hoe Sak, izay nipetraka teo anivon'ny tarika ary nilaza hoe: "Ity moanina ity no zanak'i Nang Pad." Fantatr'i Chuey tamin'io olona io sy ny filazan'i Ampan fa marina ny zanak'i Nang Pad.
Kaontin'i Ampan momba ny maty an-drano sy ny fiainana taloha Phobia of Snakes
Nisy ny tsy fitoviana teo amin'ny kaontin'i Ampan momba ny fomba nilatsahany tamin'ny fahatongavany ho nofo taloha sy ny kinova fantatry ny ray aman-drenin'i Chuey. Araka ny fahatsiarovan'i Ampan, Chuey dia niara-nilalao tamin'i Chuan tamin'ny rano marivo akaikin'ny morontsiraka. Nilaza i Ampan fa nisintona ny tongotr'i Chuey i Chuan, izay hitan'ny dadatoan'i Chuey, Klah Puang Pei. Nilaza i Ampan fa nanaikitra tamin'ny tongony havanana i Chuey avy eo, latsaka tao anaty rano ary maty tsy tra-drano. Ny fianakavian'i Chuey dia tsy nahalala an'i Chuey voakaikitry ny bibilava alohan'ny nilentika.
Ian Stevenson dia nanamarika fa misy bibilava maromaro izay mitoetra ao anaty rano na khlongs Thai, ary ny sasany miteraka fanaintainana mahafaty izay tsy miteraka lanjany. Araka izany, nanontany i Stevenson fa mety ho voakaikitry ny bibilava iray i Chuey raha tsy mahita ny rahalahiny na ny dadatoany mahita ny bibilava na bibilava snake.
Nanontany i Stevenson raha ho ampy ny fotoana hamoahana ny poizina avy amin'ny bibilava ngeza iray. Tadidio fa teo am-pirahalahiana i Chuey, indray mandeha, nanjavona tampoka ary hita faty tao anaty rano. Stevenson dia nihevitra fa mety ho tezitra tamin'ny fahitan'ny bibilava iray tao amin'ny klong i Cheuy ary nanandrana nandositra, nipitipitika tao anaty rano, izay nitarika ny fialany.
I Ampan dia nanana bibidia maingoka tamin'ny bibilava, azo inoana fa noho ny fahatsiarovany ny nitenenany tamin'ny bibilava iray tao anaty rano, izay nitarika ny fahafatesany ho an'i Chuey.
Ampan dia mamaly an'i Chuan noho ny fanaovany ny fiainany taloha Ho faty tahaka an'i Chuey
Nanantitrantitra ihany koa i Ampan fa ny iray amin'ireo andiana hetsika izay nitarika ny fahafatesany dia i Chuan nisintona ny tongony tao anaty rano. Araka ny nomarihina, ny dadatoan'i Chuey, Klah Puang Pei, dia nitatitra fa nisarika ny tongotr'i Chuey i Chuan talohan'ny nanjavonany. Chuan, izay 8 taona, dia nandà izany fanambarana izany, angamba noho ny tahotra sao izy no homena tsiny noho ny fahafatesan'i Chuey. Ny mahaliana, rehefa nahalala an'i Chuan tao amin'ny tempoly nipetrahany ho moanina i Ampan, rehefa avy nifamihina sy nitomany izy ireo, dia nanafay an'i Chuan i Ampan noho ny nahatonga azy rendrika ho Chuey.
Ny tombotsoam-piainan'ny ampanàna, dia nanana bibilava misy bibilava i Ampan, na dia tsy natahotra ny rano aza izy.
Ampan ny zavatra niainan'ny lanitra
Raha nihaona tamin'i Ampan tao amin'ny 1966 Ian Stevenson, dia nanontany izy raha nahatsiaro ny zava-nitranga tamin'ny vanim-potoan'ny fahafatesan'i Chuey tao 1950 sy ny nahaterahany tao amin'ny 1954. Ampan dia niteny fa taorian'ny nandroahana an'i Chuey ary nodorana ny vatany, lehilahy iray izay hiantso ny lehilahy voalohany, dia nitondra azy tany amin'ny toerana iray hafa nisy olona maty ary nampiditra azy ho "lohan'olona". Avy eo dia i Chuey niaraka tamin'ny lehilahy faharoa nitondra azy tany an-danitra. Tany an-danitra izy dia nahita lehilahy fahatelo manana endrika lehibe sy mainty fotsy izay niakanjo fotsy ary nahatsiaro ho tsara fanahy. Ny lehilahy faharoa dia nitondra azy tamin'ny lehilahy voalohany. Nilaza i Ampan fa, na izy avy amin'i Chuey, dia nomena sombiny. Rehefa nihinana ilay voankazo izy dia natsangana.
Ny firaisam-batana indray ao amin'ny vatana vaovao sy ny fanovana eo amin'ny lahy: Ampan Asa raha mbola zazalahy izy
Ampan, raha tanora, dia nanana toetra manokana, izay toa mampiseho ny fiainany taloha toa an'i Chuey, lahy. Nilaza ny renin'i Ampan fa tiany ny manao akanjo toy ny tovolahy iray, anisan'izany ny fanaovana pataloha fa tsy akanjo. Ampan ihany koa ny fanatanjahan-tsain'ny ankizilahy, toy ny ady totohondry. Tao amin'ny 1968, raha Ampun dia 14, dia nilaza tamin'i Ian Stevenson izy fa tiany kokoa ny ho tovolahy satria misy lehilahy manana fiainam-pianakaviana. Stevenson dia nanamarika fa nandeha niaraka tamin'ny lalan-dehilahy i Ampan. Herintaona taty aoriana, tao amin'ny 1969, Ampan dia mbola nanohy ny ady totohondry, mbola naniry ny ho tovolahy ary tsy dia tia firy amin'ny ankizilahy, izay tsy mahazatra amin'ny tovovavy.
Reincarnation & homosexualité, lesbienisme, transsexualism & olana momba ny maha-lahy na maha-vavy
Ny fanirian'i Ampan ho lehilahy, izay toa mifandraika amin'ny fahatanorany fony izy mbola lahy dia manana fitovozana miavaka amin'ny: Ny Tranonkalan'ny Zatovo any Japana) Ma Tin Aung Myo
Tao anatin'ity fandinihana ny zafikelin'i Ian Stevenson ity dia maty ny lehilahy Japoney lahy nanompo tany Birmania nandritra ny Ady Lehibe II, niorina indray tamin'ny hoe vehivavy Maorisy antsoina hoe ma, saingy nanana ny toetran'ny lehilahy ary nahazo ny vehivavy. Lasa lesbiana i Ma. Ity tranga ity dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny vovoka indray ny fahatakarana ny maha-lahy na maha-vavy, ny fametavetana, ny adim-pahaizana, ny transsexualism, ny transgender ary ny olana momba ny maha-lahy sy vavy.
Ao amin'ny andiany 1200 manodidina ny andian-jatovo nataon'i Ian Stevenson dia nanamarina ny tranga vao teraka ny zaza ao an-kibo izay nahatsiarovan'ny zazakely tsinontsinona ny fiainany taloha, fa ny 10 isan-jaton'ny tranga ihany no nanova ny fiovan'ny fanahy. Angamba raha misy olona iray efa zatra amin'ny fahatongavana ho lasa lahy sy vavy ary avy eo dia miverina amin'ny firaisana ara-nofo mifanohitra amin'izany, mety hipoitra ny olana momba ny maha-lahy na vavy.
Mifanohitra amin'ny Japoney Miaramila | Ny raharaham-pambolavolan'ny Ma, Ampane dia nanambady lehilahy lehilahy amerikana izay nijanona tany Thailandy. Nifindra tany Kalifornia izy mivady tatỳ aoriana.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Ampan dia mampiseho ny bibilava misy bibilava, toa noho ny fahatsiarovany ny sangisangy na taitra tamin'ny bibilava iray, izay nitarika ny fandevenana azy.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy: Chuey, zazalahy iray, teraka indray ao amin'ny vatana vaovao toa an'i Ampan, zazavavy. Fony mbola zaza sy zatovo i Ampan dia nanizingizina ny hanao fitafian'ny zazalahy, nandray anjara tamin'ny fanatanjahantena ho an'ny lehilahy toa ny ady totohondry izy ary nandeha toy ny zazalahy. Nilaza tamin'i Ian Stevenson i Ampan fa maniry izy fa zazalahy. Na dia nasehony ireo olana momba ny maha-lahy na maha-vavy ireo tamin'ny mbola tanora dia nanambady lehilahy izy tamin'ny farany.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Ampan, amin'ny maha-fanahy azy, dia namaritra ny zavatra niainany any an-danitra.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nifanaraka tamin'ny fiainany taloha i Ampan.